कस्तो छ पल र आँचलको “जोनी जेन्टलम्यान”- समीक्षा | Hamro Patro
बिहानको ११ : २७
कस्तो छ पल र आँचलको “जोनी जेन्टलम्यान”- समीक्षा
मन्दिप गाैतम - Sep 15 2017
"नाइँ नभन्नु ल ४" का हिट जोडी पल शाह र आँचलको नँया चलचित्र “जोनी जेन्टलम्यान” आजदेखि प्रदर्शनमा आएको छ । नितिन चन्द निर्देशित यो चलचित्रले दर्शकमाझ अहिले नेपाली चलचित्रले गरिरहेको जादु कायम राख्न सक्छ त ? के पल शाहले यो चलचित्र मार्फत सफलताको ह्याट्रिक गर्न सफल हुन्छन त ? कस्तो लाग्न सक्छ दर्शकलार्इ यो चलचित्र ? आउनुहोस् जानौं चलचित्र जोनी जेन्टलम्यानको समीक्षामा ।
यो पनि हेर्नुहोस : श्याम कार्कीको “तिम्रो मायामा डुब्न देउ मलाई”
जोनी अर्थात पल शाह जेलबाट अपराधीहरुलाई भगाउने काम गर्दछन्, उनि गलत काम सहि ढंगले गर्न खोज्ने ग्यांगस्टर हुन् । जब उनको भेट श्री अर्थात आँचलसंग हुन्छ , उनलार्इ आँचलसंग प्रेम हुन्छ र अब उनले आफ्नो पुरानो काम सब छाडी आँचलसँगै नँया जीवन बिताउने मन बनाउछन् । तर जोनीको जीवन त्यति सरल हुदैन, एक्कासी उनको जीवनमा एउटा यस्तो घटना घट्छ जसले उनलाई सोच भन्दा बिल्कुल भिन्न तर्फ मोड्छ । आखिर के हो त त्यो घटना ? के हुन्छ पल र आँचलको सम्बन्ध ? यो सबै जान्न यँहाहरुले चलचित्र हेर्नपर्ने हुन्छ ।
महेश दवाडीले लेखेको चलचित्रको कथा केहि खास छैन , दर्शकलार्इ यस किसिमको थुप्रै चलचित्र हेरिसकेको महसुस चलचित्र सुरु भएको केहि समयमै हुन्छ । कमजोर कथालार्इ एउटा अव्वल पटकथाले सम्हाल्न सकिन्थ्यो तर लेखक दवाडी त्यसमै पनि चुकेका छन्, उनको पटकथा पनि निक्कै कमजोर छ । न रोमान्स फरक लाग्दछ न त चलचित्रका पात्रहरु स्थापित छन्, न चलचित्रले उठाएको चेलीबेटी बेचबिखनको बिषयमा पावर दिनसकिएको छ न त चलचित्रले हसाउन खोजेको दृश्यहरुले हासो नै दिन्छन् , समग्रमा चलचित्रको लेखन निक्कै कमजोर छ । अझ संवादहरु मध्यम स्तरीयका पनि छैन्न । नेपाली चलचित्रले अहिलेको समयमा संवादमा ठुलो फड्को मारेको छ, प्राय सबै जसो चलचित्रमा कमिक वान लाइनर देखि प्रभावशाली संवादहरु समावेश भएका हुन्छन् , यस्तोमा जोनी जेन्टलम्यानको संवादले चलचित्रलार्इ खस्काउँन भने पक्कै मद्द गरेको छ, कुनै संवादले प्रभाव पार्दैनन् ।
पल शाह मानौ एउटा खराब कथा पटकथा र संवादको शिकार हुन पुगेका छन् यो चलचित्रमा । उनले आफ्नो काम त ठिकठाक गरेका छन् तर मेरुदण्डनै कमजोर रहँदा उनको काम निक्कै फिक्का लाग्छ । आचलको सोभर पात्रले पहिलो हाफमा धेरै हदसम्म दर्शकलार्इ इन्गेज गर्छ । उनि सुन्दर लाग्छिन्, बाकि अभिनयमा उनले अझ पनि धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने छ । बाकि चलचित्रका कुनै कलाकार चलचित्र सकिएर निस्की सकेपछी याद रहदैनन् ।
रुपेश थापा र राम शरण उप्रेतीको छायाँकन मध्यम छ, नबिन निरौलाको सम्पादन तुलनात्मक रूपमा अरु पक्ष भन्दा ठिक लाग्दछ । पारस बिक्रम शाह र देब महर्जनको एक्सन मजा आँउदैन । अलिश कार्कीको ब्याकग्राउण्ड स्कोरले पनि यसपटक प्रभाव पार्दैन । थुप्रै सिन भन्दा ब्याकग्राउण्ड लाउड छन्, उनले पनि जोनी जेन्टलम्यानमा प्रभाव पार्दैनन् ।
चलचित्रको सङ्गीतले थोरै भएनी दर्शकश्रोतालार्इ आनन्द दिनेछ, अर्जुन पोखरेलको “जब जब तिम्रो साथ” राम्रो छ । बाकि अरु गीतहरु पनि ठिक छन् ।
म्युजिक भिडियो र वेब सिरिज निर्देशन गरेका नितिन चन्दले जोनी जेन्टलम्यान बनाउन निक्कै कम मेहेनत गरेको बुझिन्छ, उनि थुप्रै साना साना कुरामा चुकेका छन् । स्तरीय सिनेमा आउने लहर चलेको बेला उनको यो प्रयास ओझेलमा पर्न सक्छ । उनको प्रस्तुति खल्लो छ , सस्पेन्स देखाउन खोजेको दृश्य सस्पेन्स लाग्दैन । उनले फिल्मलार्इ स्टाइलिस बनाउन खोजेतापनि चलचित्र स्टाइलिस लाग्दैन । टाइटल रोलमा रहेको जोनी अर्थात पलको इन्ट्री नै फितलो छ जसले गर्दा चलचित्र सुरु देखिनै ओरालो लाग्न थाल्छ, बीचमा पल र आचलको लभ स्टोरीले चलचित्रलार्इ थोरै माथि त पुर्याउछ तर त्यी धेरै बेर टिक्दैन ।
सिंगल स्क्रिन दर्शकले केहि ठाँउमा मनोरञ्जन यस चलचित्रबाट अवश्य पाँउलान्, बाकि चलचित्रले अरुलाई इम्प्रेस गर्ला भन्ने कुरामा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ । कमजोर लेखन र निर्देशनले जोनी जेन्टलम्यानलार्इ एउटा निरासाजनक हेराइ बनाँउदछ ।
रेटिंग : १.५ / ५